Maitiro Ekuyera Zvemagariro Kubudirira | Martech Zone
Chitatu, October 7, 2015 Douglas Karr
Kuyera budiriro yemagariro enhau kwakaoma kupfuura vanhu vazhinji vanotenda. Zvemagariro midhiya zvine zvikamu zvitatu:
Tungamira Shanduko - apa ndipo panotariswa nevashambadzi vazhinji kuyera kudzoka kwekudyara. Chinongedzo chinounza mushanyi zvakananga kubva pasocial media post kana kugovera kuburikidza kutendeuka. Nekudaro, ini handitende kuti ndipo panowanikwa ruzhinji rweiyo ROI.
Kukuchidzira Kutendeuka - Kuva nenharaunda inokodzera yakatakura izwi rako ine simba rinotyisa. Ini ndinogona kuposta nezve chigadzirwa kana sevhisi, iro sevhisi rinogovaniswa nevateereri vedu, uyezve munhu ari mukati medandemutande revateereri anodzvanya mukati uye anotendeuka. Ini ndinotenda izvi zvine simba rakakura kupfuura shanduko dzakananga (kunyangwe ini ndisina dhata yekudzosa izvo kumusoro).
tichimhanya - nekufamba kwenguva, kuvaka vateereri nenharaunda yenzanga venhau zvinotyaira kuziva, masimba, uye kuvimba. Kuvimba pakupedzisira kunotungamira kune yakakwira shanduko mwero. Idzi shanduko dzinogona kunge dzisinga nyanyo nongedzwa kune yekudyidzana midhiya yekugadzirisa kana kugovera. Nekudaro, iyo chokwadi chekuti zvirimo zvako zviri kuve Akagoverana uye zvinotevera zvako zviri kukura zvese zvinokanganisa kusvika kwako uye kugona kushandura.
ichi infographic kubva kuSalesforce inoita basa rakatanhamara rekutarisa zvinoitika pasocial media zvizere. Icho chokwadi ndechekuti haazi ese mabhenefiti enhau enhau anokonzeresa mukutengwa kukuru kwevatengi, midhiya enhau zvakare inokanganisa kugona kusimudzira nekuchengetedza vatengi vako.
Iwe une mashoma metric ekufunga paunenge uchigadza mushandirapamwe wako kubudirira. Kana zvasvika pakuongorora iyo data kubva kune ako mapositi, ma tweets, uye nhaurirano, iwe unofanirwa kugona kududzira data kubva kune yega yega media media network. Kuyera budiriro yako yemagariro uye flops, uye kuita yega yega yemagariro saiti saiti kuve nyore kuongorora, funga kushandisa chechitatu-bato zviwanikwa.
Nemipimo mupfungwa, magariro enhau mashandiro anowanzo kuve a kutungamirira chiratidzo chekubudirira kwesangano rako rekubata. Kudzoka kwekudyara kuchawedzera nekufamba kwenguva iwe uchiramba uchikura kusvika kwako uye chiremera, saka zvinangwa zvako zvinoda kuramba uchigadziriswa. Iyi infographic inoita basa rakakura rekupa metric iwe aunogona kucherechedza kuburikidza yega yega yemagariro midhiya chikuva.
Isu tinoramba tichikura kukanganisa kwesarudzo yedu yemagariro enhau nekubatana nevanokurudzira, kururamisa uye kugovana zvemukati zvinoshamisa izvo zvakakosha kune vateereri vedu, uye kusimudzira zvirimo nezvipo zvakananga kwavari. Chinangwa chedu hachisi cheku tengesa, ndeyekupa kukosha kwakanyanya zvekuti iwe - vateveri vedu - havadi kusiya uye kuenderera mberi kugovana zvatinogovana.
Rangarira - tarisa pane zvinoitika zvemametric ako, kwete izvo zvinongedzo zve data! Kukura kwesocial media pesheni ndiyo kiyi yekubudirira kwako.
Tags: zvakanakisisa zviitofacebook metricsmaitiro ekuyera pasocial medialinkedin metricssmart zvibodzwaevanhu vezvenhaumagariro enhausocial media chiyerozvemagariro midhiyatwitter metrics
Gumiguru 8, 2015 na12: 44 PM
Great post! Ini ndinogara ndichiti kutengesa uye kupihwa zviri zviviri zvezvakakosha zvinhu munharaunda yemagariro. Inotyisa infographic kunyangwe iwe uchitaura chokwadi.
Gumiguru 13, 2015 pa 4:37 AM
Hongu midhiya enhau ine simba kwazvo kana tikashandisa nemazvo asi kuyera budiriro kwakanyanya kuoma, pano mune ino chinyorwa / infographic yakataura zvakajeka maitiro ekuyera midhiya enhau mhedzisiro, shanduko yekutendeuka yakakosha zvakanyanya isu tinoda kubudirira mune redu basa.
Ndatenda zvikuru nekugovana ruzivo, tokuona munguva pfupi.